स्विडिश मुद्रा | swedish currency.net A guide to buy foreign currency for goods and services exports
Home स्विडिश मुद्रा RSS
स्वीडिश मुद्रा(Krona) पछि स्वीडेन को सिक्का भएको छ 1873. यो स्वीडिश राष्ट्रिय बैंक द्वारा जारी छ, Sveriges Riksbank. अंग्रेजीमा, सिक्का infrequently स्वीडिश मुकुट रूपमा गर्न alluded छ (क्रोना स्विडिश मुकुट implies). एक क्रोना मा subdivided छ 100 मुद्रा. तैपनि, सबै अयस्क सिक्का सेप्टेम्बर को रूपमा निलम्बित थिए 30, 2010. उत्पादन अझै पनि अयस्क मा अनुमानित छन्, तर जब पैसा तिर्ने सबै समुच्चय को सबैभन्दा नजिकको क्रोना समायोजित छन्. सिक्के अहिले प्रयोगको लागि उपलब्ध छन् 1 Krona, र5र 10 crowns. बैंकनोट्स को विभाग मा हो 20, 50, 100, र 500 crowns.
स्वीडेन जीवनको एक लाभप्रद तरिका पूरा भएको छ, किनभने किनारा निजी उद्यम काटन को, व्यापक सामाजिक लाभ, एक उन्नत dissemination रूपरेखा, र एक गम्भिर प्रतिभाशाली काम शक्ति. अर्थव्यवस्था तेजी बाहिर विनिमय गर्न स्थित छ, काठ को सम्पत्ति आधार प्रयोग, जलविद्युत्, र फलाम खनिज. विश्वव्यापी वित्तीय आपतकालीन को 2008 घट्यो भाडा चासो र उपयोग, यसको ठोस धन र आधारभूत अनिवार्य notwithstanding फिर्ती ढल्क्यौं स्वीडिश अर्थव्यवस्था बारेमा ल्याउन गर्न. ठोस बर्तन ट्रेडों वर्ष पछि एक ठोस बाउन्स थपियो 2010 गर्न 2011.
स्वीडिश मुद्रा मा प्रस्तुत भएको थियो 1873, को Riksdalersgatan supplanting. नगद नर्वे र डेनमार्क संग स्कैंडिनेवियाई मौद्रिक संघ को एक aftereffect रूपमा प्रस्तुत भएको थियो, म विश्व युद्ध सम्म जो गइरहे. यो सम्झौता अन्तर्गत मौद्रिक प्रकारका सबै भन्दा राम्रो गुणस्तर स्तर अन्तर्गत थिए. मौद्रिक संघ म विश्व युद्ध को मा चम्कने बस्तु-अप समाप्त 1914. स्वीडेन अगस्ट मा उच्चतम गुणस्तर स्तर surrendered 2, 1914, र एक बदलिएका गमागमन मात्रा बिना संघ अन्त आइपुगेको.
सम्झौता गरेर, स्वीडेन यूरो उपयोग गर्न यूरोजोन र proselyte सामेल गर्न आवश्यक छ. हुन यो सक्छन् रूपमा, सबैभन्दा Swedes को coin.On सेप्टेम्बर प्राप्त विरुद्ध हो 14, 2003, जो बाहिर ट्यून मतदाता पचास छ प्रतिशत यूरो प्राप्त अस्वीकार. एक भाग्ने दफा शोषण, स्वीडेन को सरकार ERM द्वितीय सामेल छैन छानिएको छ, यूरो प्राप्त गर्न एक पूर्वर्शत.